NGL Recovery Unit Factory | China NGL Recovery Unit Manufacturers, Suppliers
Toeram-pamokarana entona solika liquefied vita amin'ny LPG
Ny LPG dia entona solitany liquefied, izay vokarina rehefa manadio ny menaka maloto na mivadika avy amin'ny dingan'ny fitrandrahana solika na entona voajanahary. LPG dia fifangaroan'ny solika sy entona voajanahary miforona eo ambany fanerena mety ary misy toy ny ranon-javatra amin'ny mari-pana. LPG (Gaz Solika Solika) dia ampiasaina betsaka amin'ny solika hafa ho an'ny fiara, saingy mety koa ho toy ny akora simika. Izy io dia ahitana propane sy butane (C3/C4). Ho fanarenana ny LPG/C3+ ny Diviziona Injeniera dia manolotra pr...
Vahaolana namboarina ho an'ny fitrandrahana entona voajanahary avy amin'ny mpamatsy sinoa
Ny sandan'ny ranon-tsolika voajanahary, toy ny etana sy propane, dia mitombo noho ny fitomboan'ny fangatahana eran-tany ho an'ny famatsiana petrochemical, fanafanana ary herinaratra. Ny vahaolana fanarenana entona voajanahary Rongteng (NGL) dia manam-pahaizana manokana hanamafisana ny fanarenana rehefa manome anao ny fahafaha-miasa avo lenta sy ny fiverenana bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola.
Custom 2~14 104 Nm3/d maivana hydrocarbon fanarenana skid ho an'ny entona voajanahary
Ny hydrocarbon maivana, fantatra ihany koa amin'ny hoe condensate entona voajanahary (NGL), dia mandrakotra ny C2 ~ C2 + amin'ny composition ary misy singa condensate (C3 ~ C5). .
Ny sandan'ny anjara NGL Recovery
Ny fanarenana ny hydrocarbon maivana dia manondro ny dingan'ny famerenana ranon-javatra ireo singa mavesatra kokoa amin'ny entona voajanahary noho ny metana na etana. Amin'ny lafiny iray, mikendry ny hifehy ny ando hydrocarbon amin'ny entona voajanahary izy io mba hahatongavana amin'ny mari-pamantarana kalitaon'ny entona ara-barotra sy hisorohana ny fikorianan'ny gazy-liquid roa.